Dabagalka Wararka 23 04 2016 Yaa masuul ka ah Soomaalidii bada ku dhamaatay? - Saafi Films Production Somali Films Hindi Af Soomaali Musalsal heeso
Dabagalka Wararka 23 04 2016 Yaa masuul ka ah Soomaalidii bada ku dhamaatay?
Warka 23 04 2016 Baarlamaanka oo go'aan ka gaaray mooshinkii Jowhar & wabiga Shabeele oo fatahaad looga..
Rabitaankii Nafteyda Part 60
DABAGALKA WARARKA 28 09 2015
Qaabka ay u shaqeeyaan hey’adaha garsoorka Daah Furnaan.
FAALIYAHA QARANKA 09 03 2019 Wasaarada Haweenka oo shir kala qeybinaya haweenka Soomaaliyeed ka furtay…
Faaliyaha 23 09 2017 Qosolka maamul goboleedyada Qatar xiriirka u jaray.
Faaliyaha Qaranka 28 05 2016 Qosolka Wariye Fanaan isku badalay.